भुटानि प्रधानमन्त्रिले लिए सपथ - Nepali Online News Media-shikharnews.com
भुटानि प्रधानमन्त्रिले लिए सपथ
२०७५ कात्तिक २२ बिहीवार
काठमाडाै, २२ कात्तिक। भुटानमा डा. लोटे छिरिङले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथग्रहण गरेका छन्। राजधानी थिम्पुमा बुधबार आयोजित परम्परागत समारोहमा भुटानी नरेश जिग्मी खेसर नाम्गेल वाङचुकले लोते छिरिङसहित मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई दर्शनभेट र खादा प्रदान गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरुलाई धर्मगुरुको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताका सपथ गराएको भुटानी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।
शपथपछि भुटानी मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बुधबार साँझ बसेको छ। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएका छैनन्। कार्तिक १ गते भएको आम चुनावमा छिरिङको नेतृत्वका दल ड्रुक न्यमन रुव शोग–पाले ४७ मध्ये ३० स्थान प्राप्त गर्दै बहुमत ल्याएको थियो। सो दल पाँच वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको हो। मन्त्रिपरिषदको नाम केही दिनअघि सार्वजनिक गर्ने क्रममा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री डा. लोटे छिरिङले चुनावी घोषणाअनुसार नै बढ्दो असमानतालाई कम गर्नका लागि काम गर्ने बताएका छन्। बुधबार नै नरेशले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभामुखलाई पनि खादा प्रदान गरेका थिए। २००८ देखि संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको भुटानको अन्य देशका भन्दा फरक प्रकारका व्यवस्थ रहेको छ।
दर्ता भएको राजनीति दलहरुबीच पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। पहिलो चरणमा बालिक मतदाताले दललाई छनोट गर्छन्। पहिलो चरणमा देशभरबाट पहिलो र दोस्रो हुने दलका उम्मेदवारबीच अन्तिम चरणमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। नेशसन एसेम्बली राजनीतिक दलले मात्रै भाग लिन पाउँछ भने नेसनल काउन्सिल (माथिल्लो सदन) र स्थानीय तहमा भने राजनीतिक दल नभइ व्यक्ति चुनाव लड्ने व्यवस्था रहेको छ। नेसनल एसेम्बलीको चुनाव गराउन सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने सल्लाहकार परिषदले गर्ने गर्छ। परिषदले दुवै चरणका चुनाव नब्बे दिनभित्रै गराइसक्नु पर्ने व्यवस्था भुटानका संविधान रहेको छ।
संसदको अवधि हुन्जेल निर्वाचित सरकारले मात्रै काम गर्न सक्छ। पहिलो बैठक बसेको मितिले त्यसको अवधि पाँच वर्षसम्म हुन्छ।
‘कार्यालयमा मेरो होइन, आफ्ना छोराछोरीको तस्वीर राख्नुहोस्, निर्णयगर्दा उनीहरुको अनुहार सम्झिनुहोस,
मायावाती–अखिलेशमाथि आदित्यनाथ भारी, राहुल गान्धी आफै पराजित हुने अनुमान
विश्वकै नम्बर वन जड्याहा कहाँ होलान् !
‘टिम्बुरे हत्या काण्ड’को २६ वर्षपछि ठूलो र उस्तै ‘आरुबोटे हत्याकाण्ड’ विपुल अधिकारी
२०७६ जेठ ८ बुधवार
मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान पु¥याइयो
कान्समा पहिलो पटक पुगेकी प्रियंकाको फस्ट लुक्स
आमिर खानको भान्जाले किन गरे सम्बन्ध विच्छेद ?
विश्वकपका लागि इंग्ल्यान्डको राष्ट्रिय टिम घोषणा, ३ मुख्य परिवर्तन
महिलाहरु किन परपुरुषसँग सेक्स गर्न चाहन्छन् ?
२०७६ जेठ ५ आइतवार
केटाको के देखेपछि मोडल एनी कुँवरलाई सेक्स चाहना जाग्छ ?
चुनावको मतगणना हुनेबेला प्रधानमन्त्री मोदी गेरु वस्त्रमा गुफा पसे
जहाँ आमा बुवाले नै छोरीलाई बेच्छन्, किन्न बजार नै लाग्छ
म्यागाटो बेल्जियमले आफ्नो प्रविधि र उत्पादनहरु नेपालमा भित्र्याउदैं
२०७६ जेठ ६ सोमवार